Programme fiaraha-miasa an-tserasera TReND any Afrika - AfricaArXiv
Ny ekipa ao TReND any Afrika dia namorona tambajotra manam-pahaizana izay afaka manampy ny mpahay siansa Afrikana hamolavola ny tetikasany tadiavina amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny fandaniana ireo fetra mivezivezy ateraky ny areti-mandringana ankehitriny.
Ny fanampiana izay misy dia mety miainga amin'ny tetik'asa maharitra kely ka hatramin'ny fanandramana lehibe izay mihitatra mandritra ny volana maro na taona maro aza ary mety hitarika fiaraha-miasa maharitra mihoatra ny toe-draharaha manerantany miaraka amin'ny fitsidihana sy fifanakalozana eo amin'ny samy olona.
Raha mila fanazavana fanampiny sy antsipiriany sintonina Toro lalana momba ny fiaraha-miasa an-tserasera ny TReND any Afrika (PDF).
Amin'ny fidirana amin'ny programa vaovao anay, ny tetikasanao dia hiaraka amin'ny manam-pahaizana vonona hanomboka fiaraha-miasa vaovao miaraka aminao! Mitadiava fanampiana fanampiny ary hatsarao ny tamba-jotra miaraka amin'ireo mpahay siansa manerantany. Aza mandany fotoana, midira ankehitriny!https://t.co/PwK6uS0rjd pic.twitter.com/LQQl94Zqlp
- TReND any Afrika (@TReNDinAfrica) Febroary 19, 2021
Tongasoa ireo manam-pahaizana amin'ny sehatry ny siansa, manomboka amin'ny mpianatra PhD ka hatramin'ny profesora, izay mahatsapa fa te hanao fanovana ary manampy ny hafa hanatanteraka ny nofinofy siantifika.
Raha vantany vao voarainay ny fangatahanao dia hanana fidirana amin'ny angon-drakitra momba ny tetik'asa izahay amin'izay hahitanao ny tetikasa mifanaraka amin'ny fahaiza-manaonao sy ny fotoana anananao.
Misoratra anarana ho manam-pahaizana
Manana tetikasa aho
Ekipa misy olona telo farafahakeliny manana fanontaniana kely sy fisalasalana, na tetik'asa lehibe mitaky fanohanana maharitra aza dia afaka mihatra mba ho lasa mpiara-miasa afrikanina amin'ny programa fiaraha-miasa amin'ny Internet.
Raha vantany vao nahazo ny tetikasanao izahay dia hampidirina ao amin'ny tranonkalanay momba ny tetik'asa izany ary hampiasaina amin'ny manam-pahaizana rehetra hahita ny mpikaroka mety indrindra hanampy anao amin'ny tetikasanao.
Soraty ny tetikasanao
Ianaro daholo ny momba ny programa fiaraha-miasa TReND ao amin'ny trendinafrica.org/collaborations
Momba ny TReND any Afrika
Manohana ny siansa any Afrika. Ao amin'ny TReND, mino ny sandan'ny fanavaozana siantifika izahay amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Manohana ny fikarohana biomédical any Afrika izahay amin'ny fanomezana ireo mpikaroka afrikana fitaovana sy fahaizana hampiroborobo ny tanjon'ny fikarohana azy ireo.
Niorina voalohany tao amin'ny Oniversiten'i Cambridge, izahay dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra tantanan'ny tambajotran'ny mpahay siansa mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny oniversite ambony eran'izao tontolo izao. Izahay dia mazoto amin'ny fanatanjahana siantifika sy fanavaozana. | trendinafrica.org